QEEXIDA JINSIGA EE DIGAAGGA "CADAANKA RUUSHKA" - BEERAHA DIGAAGA
Muddo dheer tan hen waa lammaanaha nin ee nolosha. Caleenta digaagga, caanaha Ruushka, waa mid ka mid ah cagaarka ugu caansan uguna badan dalalka CIS.
Sababtoo ah warkeeda, waxaad kula kulmi kartaa beeraha digaaga iyo qoysaska, iyo alaabta ay ka mid yihiin dukaamada.
Xannaaneeyayaasha muddo 20 sano ah ayaa shaqo ku abuuray abuurista dalkan. Natiijo ahaan, wuxuu helay jinsi cad oo Ruush ah, iyo kan labaad ee magaca "Snow White".
Qof kasta oo go'aansaday in uu ku biiro beerashada digaaga waa in uu ku bilaabo koritaanka tarankan. Tani waxay u baahan tahay kharashaadka khaaska ah ee khaaska ah.
Taariikhda taranta caanaha
Ruushka caddaanka ah ee Ruushka ah waxaa lagu xannibay rag ka soo jeeda jinsiyado kala duwan oo ka soo jeeda asal ahaan (Danish, English, American) iyada oo "naagaheena" dharbaaxay. Shaqada ugu horreysa ee ku saabsan taranka ayaa bilaabay 1929. Iyo intii lagu jiray 24-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa la aasaasay, waxay marey marxalado dheer oo ah qaabkeeda.
Hawlaha taranta ee ku salaysan tan ayaa loo qaaday si loo helo wax soo saarka ukunta. Iyo 1953, waxaa la ansixiyay.
Midawga Soofiyeeti oo dhan, jinsiga cad ee Ruushka ah ee digaagga waxaa loo isticmaalay oo kaliya jihada ukunta, iyo wixii la mid ah ilaa 1965. Wax-soo-saarka wakhtigaas wuxuu ahaa 190 ukumo sanadkiiba miisaankeedu yahay ilaa 60 garaam.
In beeraha digaagga ee ku hawlan yihiin taranta taranka, breeders gaareen tirooyinka iyo 200 ukumo sanadkiibaiyo marmarka qaarkood. Laakiin wakhtigu wuu dhaafay, iyo caleemaha ayaa bilaabay inuu soo saaro wax soo saarkooda si qallafsan oo cadaan ah. Farqiga u dhexeeya noocyadani waxa ay gaareen 50 ukun, iyo miisaanka guud ee saddex kiilo sannadkiiba.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in taranka joojiyay in la dalbado, sanadkii 1990 ayaa tiradoodu hoos u dhacday ilaa saddex milyan oo qof. Sida laga soo xigtay qiyaasaha, sannadkii 1975 waxay tiradoodu ahayd 30 milyan oo shimbir.
Waqtigeennaba, noocyadani waxay tiradeeda ku haysatay dalka Turkiga, Azerbaijan iyo Turkiga. Inkasta oo naanadahayaga aan iloobin illinkaas oo sii wadaan in ay ka shaqeeyaan si ay u kordhiyaan wax-soo-saarkooda, iyaga oo rajeynaya in ay kordhiyaan waxqabadka.
Breeders filanayaa in mustaqbalka dhaw, midabka Ruush caddaan ah ay awoodi doonaan inay la tartamaan noocyada shisheeye.
Qeexida midabka cad ee Ruush ee digaagga
Ruushka cadaanka ah ee digaagga ee digaagga waxaa lagu sharxi karaa sifooyinka astaamaha sida:
Madaxa si fiican ayaa loo horumariyaa waxayna leedahay mid dhexdhexaad ah.
Ragga ka mid ah noocyada caleenta Ruushka ah waxay leeyihiin shanlo waaweyn oo ah qaab caleemo ah oo leh shan ilkood. Iyo shanlada adhigu waa yar yareeyeen dhinaca.
Gagaashu waa mid adag, huruud ah.
Dheguhu waa caddaan yar.
Qoorta waa mid weyn, dhererka celceliska.
Shimbiraha waxay leeyihiin laabta ballaadhan.
Burcadka shimbirradu waa dhoobo, dhabarkuna waa ballaaran yahay.
Caloosha caanaha waa mid caan ah.
Baalashooyinka shimbiraha ayaa si fiican u horumarsan waxayna u haboon yihiin jirka.
Lugaha waa jaalaha ah, dharka ayaa la waayay.
Dhererka dhaadheer waa mid dhexdhexaad ah, si fiican loo horumariyey
Dhammaan shimbiraha noocaan ah waxay leeyihiin midab isku mid ah.
Digaagga yaryar waxaa lagu daboolaa flffish huruud ah, taas oo lagu beddelayo cadeyn cad oo markaad koreyso.
Waa maxay qaababka lagu garto jinsiga?
Sida hore loo soo sheegay, jinsiga cad ee Ruush ee digaagga waxa loola jeedaa wax soo saarka ukunta, iyo beertiisa waxaa loo rogrogaa oo keliya iyada oo loo marayo. Intaa waxaa dheer, tani tan waxaa loo doortay si looga hortago jeermiska, neeflayms.
Sababtoo ah geeddi-socodkan, ayaa caansaankani waa mid aad u xiiso leh warshadaha bayoolojiga, taas oo keenta daawooyin ammaan ah.
Caleenta Ruushka ah waxaa la siin karaa bred, sida beeraha digaagga waaweyn, iyo guriga.
Sidoo kale, beeralayda cusub ee digaaga ayaa bilaabi kara in ay ku lug yeeshaan dhaqdhaqaaqyadaas iyada oo la siinayo jinsi caan ah oo Ruush ah, maadaama aan la qabin xaaladaha xabsiga oo aysan u baahneyn fiiro gaar ah.
Shimbiraha noocaan ah waxay leeyihiin iska caabin ku filan cudurada, shimbiraha qaangaarka ah waxaa lagu gartaa nabadgelyadooda ku dhawaad ​​91%, iyo xayawaanka da'yarta ah ee ku saabsan 96%.
Waa maxay tayada wanaagsan ee sifeynta caanaha
Cudurka Ruushka ah ee Ruushku maaha mid aan macquul aheyn xaaladaha xabsiga iyo quudinta
Tilmaame muhiim ah waa iska caabin adag oo neoplasm ah.
Shimbiraha buuggani waxay u adkeysanayaan cudurrada, labadaba dadka waaweyn iyo dhalinyarada.
Digaagga ayaa leh wax soo saarka ukunta fiican.
Waa maxay macnaha saxda ah ee taranka?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu ilaalin karo taranka. Mid kastaaba wuxuu leeyahay dhinacyo fiican iyo mid xunba, oo aad u baahan tahay inaad ka warhayso markaad tarantaan taranto.
White beeraha Ruush waxaa lagu hayn karaa on qariidad hoose. Habkani waa mid ku habboon mulkiilayaasha meelaha waaweyn.
Nuxurka habkan waa in shimbiraha qolka lagu hayo qashin adag oo dabaqa ah. Inta badan shimbiraha waa in ay ku qaataan wadada, taas oo u oggolaanaysa beeralayda digaaga inay badbaadiyaan on feed, sababtoo ah shimbiraha waxay bilaabaan cunista dufanka, cayayaanka iyo cawska cagaaran.
Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in tirada shimbiraha aysan aheyn mid aad u ballaaran, maadaama ay jajabinayaan cawska oo dhan, cunaanna cayayaanka oo dhan. Sidoo kale, tiro badan oo shimbiro ah ayaa halis u ah cudur kasta oo faafa.
Wax walbaa waa wax aan suurtagal ahayn in la ilaaliyo shimbiraha oo dhan meel ballaaran, sidaas darteed beeralayda ayaa u baahan waqti aad u badan oo ay ku qaataan qaybihiisa. Waxaa intaa dheer, mid ka mid ah digaagaagu wuxuu noqon karaa mid xiiso leh oo ku saabsan waxa ku yaal dhulka xuduudiisa iyaga oo si sahal ah u noqdaan dabin kasta oo ugaadhsiga.
Si aad shimbirahaaga u badbaadiso dhulka waa in la ilaaliyaa, si looga ilaaliyo ugaarsadayaasha.
Beeralayda daaqsatada ah ee khibrada leh sida meel loo yaqaan "solarium". Goobta loo qoondeeyay shimbiraha waa inay noqotaa mid adag, sidaas awgeed marka dambe waxaa jiri doona dhibaato culus marka la nadiifinayo.
Beeraha doofaarku uma baahna inuu dhulka ku dhiso meel dhulka ku taalla, tan iyo xilliga xilli roobaadka waxay u noqon doontaa wasakh iyo faafinta bakteeriya, taas oo aanad u baahnayn.
Dhiqteraha digaaga oo aan awood u lahayn inuu shimbirihiisa ku siiyo meel weyn oo u baahan in la qalabeeyo batariyada unugyada. Mawduucan oo kale ah digaagga cad ee reer Ruush wuxuu kuu ogolaanayaa inaad meel badbaadiso.
Intaa waxaa dheer, in beeralaydu maalin kasta u diyaargaroobaan oo ay u ilaaliyaan qolalka. Dabaqa qolka digaaggu wuxuu nadiif u noqon doonaa wakhti kasta, sababtoo ah shimbiruhu waxay inta badan ku qaataan baqashada. Laakiin version noocan ah ee digaagga ayaa leh cillado badan.
Dabcan, waxaa jira waxyaabo dheeraad ah oo ku jira sheyga gacanta oo yareynaya quudinta, sababtoo ah waxay isticmaali doonaan tamar yar. Si kastaba ha noqotee, beeralay oo leh shimbir cell waa inay si joogto ah ula socdaan xuduudaha microclimate ee coop digaag.
Heer sare ama hooseeya iyo qoyaanku waxay sababi karaan dhibaatooyin caafimaad oo ku dhaca shimbiraha. Muujiyeyaasha qoyaanka qoyaanka ah ee hawadu waa in aanay ka badnayn 70% Heerkulka hawada wakhtiga qabow waa inuusan ka yarayn -2 degree Celsius, iyo xilliga diiran aan ka badnayn +27 heerka Celsius.
Iyadoo hoos u dhac ku yimid heerkulka ee shimbiraha wuxuu xakameyn karaa maqaarka iyo xayawaanka. Sidoo kale shimbiraha Soosaarka ukumaha ayaa yaraadaylaakiin helitaanka raashinka waa mid isku mid ah ama xitaa kordhaya.
Heerkulka sare waxaa kale oo uu saameyn xun ku yeeshaa shimbiraha, hoos u dhigista cuntadooda, taas oo mustaqbalka saameyn xun ku yeelan doonta wax soo saarka ukunta. Biyo la'aanta sidoo kale waxay si xun u saameysaa shimbiraha waxayna yareysaa wax soo saarka.
Dhamaan shimbiraha quudinta shimbiraha yar yar
Digaagga Ruushka ah ee Ruushka horey u marinta horumarinta ayaa sidoo kale lagu quudin jiray sidii hilib. Shimbiraha yaryar waa in la quudiyo laba ama saddex jeer maalintii. Iyada oo koritaanka shirkadda dhalinyarada sii kordhaysa, iyo baahidooda ay ku quudiyaan, Sidaa darteed, marka ay koraan, yaree sumadda borotiinka ee cuntada Shimbiraha.
Ilaa siddeedii toddobaad ee da'da, digaagga waa inaysan ku koobnayn cuntada, laakiin laba bilood ka dib, waa lagama maarmaan in la shimiyo shimbiraha illaa 20%, waxaa kaliya oo lagama maarmaan ah in la fiiriyo shimbiraha haddii qof kastaa helayo quudinta.
Digaag yar u baahan tahay in la quudiyo maaha kalluunka quudinta, laakiin Ilmaha. Marka la nuugo waxay u baahan yihiin muddo dheer. Waxa kale oo ay yaraynaysaa suurtagalnimada qawlaysatada digaagga.
Iyadoo bilawga ah 21 toddobaad ee nolosha shimbiraha yar yar, waa inay bilaabaan inay quudiyaan sidii shimbir qaangaar ah. Nafaqada shimbiraha yar yar iyo kan qaangaarka ah way ka duwan tahay kuwa kale inay leeyihiin cusbo kalsium ah. Cusbadani waxay ka caawineysaa in ay qaadato ukunta leh qolof qaro weyn oo yareyneysa suurtogalnimada ukunta dareenka.
Waxa kale oo muhiim ah in la diyaariyo shimbiraha yar yar ee qaadashada ukunta. Si arrintan loo sameeyo, quudinta waa in ay kordhisaa waxyaalaha borotiinka. Iyada oo uu gargaar, habka taranka ee dhalashada Ruush cad cad ee digaagga ayaa si dhakhso ah u kobciya, iyo sidoo kale heerka kordhinta abuurka ukumaha kor u kaca.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan quudinta digaagga broiler.
Secrets of quudinta shimbiraha qaangaarka ah ee dhalashada Ruush cad ee digaagga
Digaag cad oo roodhi ah oo Ruush ah ayaa loo baahan yahay in la quudiyo laba jeer maalintii oo ay ku jirto quudin buuxda. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato taas nuujiyaha lama buuxin karo fuushankamaxaa yeelay, digaagga way kala firdhin doonaan wax walba.
Si aad u cuno shimbiraha waxay ku filnaan doontaa in ay buuxiso 2/3 ee quudinta. Haddii aad go'aansato inaad ku shubtid shimbiraha cuntada qoyan, ka dibna qaddarkeeda waa in la dhimo. Digaagga qoyan ee qoyan waa inay cunaan nus saac, sababtoo ah waxay si deg deg ah uga sii daraysaa oo waxay yareysaa tirada nafaqooyinka.
Ka dib markii digaagga ay cuneen feedhayaashooda, waa lagama maarmaan in la dhaqo si aysan jirradu uhin furiin. Beeraleyda digaaga cusub ayaa u baahan in ay ogaadaan xaqiiqda ah in laga bilaabo bilawgii soo-saarka ukunta ee shimbirta ilaa da'da 48 usbuuc, soosaarkooda ukumaha ayaa si joogto ah u koraya.
Taasi waxay sheegaysaa in ay tahay in la quudiyo wax ka badan sidii caadiga ahayd. Ka dib markaa, ukumaynta ukumaha ayaa hoos u dhacda. Nidaamkani wuxuu gaaraa ugu yaraan da'da 48 toddobaad. Sidoo kale, waqtigan, taranka cad ee Ruushku wuxuu joojiyaa koritaanka, taas oo macnaheedu yahay in xaddiga quudinta la yarayn karo.
Celcelis ahaan 120 gram oo feed ah xayawaan ayaa maalin kasta la cunaa. Hal sano gudaheed waa qiyaastii 44 kiilo.
Haddii cagaar cagaaran lagu daro raashinka maalinlaha ah ee digaagga, markaa wadarta cunnada waa in la kordhiyaa ilaa 170 garaam maalintii. Sababtaas awgeed, qashinka cuntada nadiifka ah waa la yareeyey, sidoo kale, waxsoosaarkooda iyo awooddooda digaagga ayaa kordhay sababtoo ah waxyaabaha ka mid ah qaybaha caa fi maadka leh ee cagaaran.
Marka aad bamgareyso bocorka shimbiraha waxaad ka hortagi kartaa cuduro badan.
Waa maxay tilmaamayaasha waxtarka leh ee caleemaha cagaaran ee digaagga ee digaagga?
Celceliska ukunta celceliska ukumaha sanadkiiba wuxuu ka koobanyahay 200 ilaa laba iyo tobankii bilood ee hore ee wax soo saar. Celceliska miisaanka ukunta waa 56 grams. Laakiin waxaa jira heysta diiwaanka digaagga ee bixiya iyo 244 ukun sanadkiiba.
Waxay dhacdaa in ay qaadaan qiyaastii 300 ukumo sannadkii, laakiin taasi waa mid aad u yar. Digaagga cad ee Ruushka ah waxay bilaabaan inay ku deg degaan muddo shan bilood ah, markaa waxaad filan kartaa inaad hesho dakhli deg deg ah.
Tan iyo markii tani tan waxaa la bred siiyay ukunta kaliya, ka dibna wax soo saarka hilibka ee shimbiraha ee caanahan ayaa si aad ah u xanuunsaday. Miisaanka hal mar oo qiyaas ahaan waa 1.8 kiilogaraam, cirbadna way kala duwantahay 2 ilaa 2.5 kg.
Ruushka cadaanka ah ee digaagga ayaa leh wax soo saarka ukunta aad u fiican. Tani waxay wali tahay mid caan ah sida gobollada qaar ka mid ah sida hore.
Tani waxay ku haboon tahay oo kaliya beeralayda bilawga ah, ma ahan mid ku habboon oo ay ka kooban tahay quudinta iyo quudinta. Shimbiraha Gaar ahaan dadka waaweyn waxay leeyihiin iska caabin fiican oo cudurro ah. Wareegtada waxaa sidoo kale lagu hayn karaa xilliga kuleylaha xagaaga, taas oo aad u fiican beeralayda hiwaayadda.